Huawei dia handefa takelaka misy rafitra fandidiana hafa ankoatra ny Android | Androidsis
Huawei dia handefa takelaka misy rafitra fiasa vaovao
Eder Ferreno | | Huawei, Takelaka Android
Huawei dia efa niomana ampiasao ny rafitry ny fiasao amin'ny vokatrao, noho ny fifanolanana tamin'ny Etazonia. Ka amin'ny voalohan'ny volana nasongadina HarmonyOS, izay araky ny orinasa dia afaka miasa amin'ny karazana fitaovana rehetra. Na dia amin'izao fotoana izao aza ny drafitry ny marika dia ny hanohy hampiasa Android, dia gaga izy ireo miaraka amina tetikasa vaovao.
Satria i Huawei dia miasa amin'ny fandefasana takelaka tsy misy Android ho toy ny rafitra miasa. Saingy tsy hampiasa ny HarmonyOS koa izy ireo. Miasa kosa ny orinasa miaraka amin'ny rafitra miasa Rosiana hafa, antsoina hoe Aurora OS, izay malaza be any Russia. Ny orinasa dia efa tokony nifanaraka tamin'ny Russia.
Aurora OS dia fanovana novaina an'ny Sailfish OS, izay iray amin'ireo rafitra fiasa be mpampiasa indrindra any Rosia. Ity dia traikefa mpanamory fiaramanidina ho an'i Huawei, izay naneho fahalianana rehefa nahita ny lazan'ity rafitra fiasa ao amin'ny firenena ity. Noho io antony io dia hamokatra takelaka 360.000 XNUMX eo ho eo ny tsena rosiana ny marika sinoa.
Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy nambara tamin'ny fomba ofisialy ity fifanarahana ity. Na dia manolotra izany aza ny haino aman-jery isan-karazany mandroso tsara ny fifampidinihana. Noho izany, antenaina fa amin'ity andro ity dia hisy ny fanambarana ofisialy, ka ho lasa zava-baovao ho an'ny mpamokatra izany.
Amin'izany fomba izany dia hanome ny Huawei dingana voalohany miaraka amin'ny rafitra fandidiana hafa mankany Android. Na dia zavatra izay ho voafetra ihany amin'ny tsena rosiana amin'izao fotoana izao, avy amin'ny zavatra efa takatra. Tsy fantatray raha manana drafitra handefa takelaka miaraka amin'ny Aurora OS any ivelan'i Russia izy ireo.
Manantena izahay fa tsy ho ela dia hisy ny fanamafisana amin'ity lafiny ity, amin'ny fanombohana ireo takelaka Huawei misy Aurora OS ity. Dingana iray lehibe ho an'ny mpanamboatra sinoa, izay amin'io fomba io dia miditra amina tetikasa hafa. Ahoana ny hevitrao momba ity fanapahan-kevitry ny marika sinoa ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei dia handefa takelaka misy rafitra fiasa vaovao
Ahoana ny fandikana lahatsoratra amin'ny sary miaraka amin'ny Google Photos